Ahịa ahịa maka uwe a na-ewepu
A na-ekewa gloves n'ime ebe anọ; nlekọta ahụike, mkpuchi ọrụ mkpuchi ụlọ ọrụ, ezinụlọ na ụlọ ahịa na ụlọ ahịa na ụlọ ọrụ ọrụ. N'ime ha, ogwe aka na ahụ ike gụpụtara 62% nke mkpokọta oriri. Dika akuko nke European Center for Disease C ...
Chlorine saa usoro nke akpaka ọgwụ nitrile uwe mmepụta akara
site ha na 21-06-09
Kedu ihe bụ usoro eji achọ chlorine? Gini mere eji eme akwa nitrile glove production iji usoro nhicha chlorine? Dika gloves na-enweghi ogwu aburula ihe nkpuchi aka di nkpa nke na edozi nsogbu nke uwe aka ma na-ebelata mmetuta nke uzo aka na onye oru, ihe eji env ...
Disposable nitrile uwe
Okwu Mmalite nke mkpofu nitrile mkpofu Disposable nitrile gloves bụ ụdị kemịkalụ sịntetik, nke ejiri acrylonitrile na butadiene mee site na usoro pụrụ iche na usoro mmezi. Mkpụrụ obi na nkasi obi dị nso na gloss latex, ọ gaghị eme ka akpụkpọ anụ ọ bụla ...